Nidaamka Nadiifinta Acid-Nucleic Acid-96
Soo saarida DNA / RNA
Iskuxirka gaadiidka Viral
Nucleic Acid Sifeynta S ...
Nidaamka Nadiifinta Acid
Nidaamka Nadiifinta Nucleic Acid wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyada walxaha magnetic ee hababka nadiifinta nucleic acid ee ku saleysan beads-ka waxyaabo badan oo muunad ah, sida dhiigga oo dhan, unugyada, unugyada iwm.
Qalabkan waxaa loogu talagalay qaabdhismeed xeel dheer, xakamaynta UV-faddaraynta iyo howlaha kululaynta, shaashad taabasho weyn oo hawlgal fudud ah. Waa qalab awood u leh baaritaanka hidda-socodka iyo cilmi-baarista maadada ee shaybaarrada bayoolojiga.
1. Jaangoyn iyo natiijo deggan
Nidaamka xakamaynta darajada warshadaha wuxuu hubiyaa xasiloonida 7 x 24 saacadood oo shaqeynaya. Barnaamijka softiweerku wuxuu leeyahay barnaamijyo lagu nadiifiyo nukliyeerka caadiga ah. Isticmaalayaashu sidoo kale waxay si xor ah ugu tafatiri karaan barnaamijyada shuruudahooda. Hawlgalka otomaatiga ah iyo kan caadiga ah wuxuu hubiyaa natiijooyin deggan oo aan qalad farsamo lahayn.
2.Full otomaatiga iyo soo-saarka sare
Nidaamka isdaahirinta otomaatigga ah, qalabkani wuxuu ka baaraandegi karaa ilaa 96 shaybaar hal orod, oo ah 12-15 jeer ka dhakhso badan hannaanka gacanta.
3.High-profile iyo Indheer garad
Ku qalabaysan shaashadda taabashada warshadaha, laambadda UV, nidaamka xakamaynta heerkulka xannibaadda, qalabkani wuxuu ka dhigayaa hawlgal fudud, tijaabo ammaan ah, lysing badan oo kugu filan iyo natiijo fiican. Internetka waxyaabaha ”moduleka waa ikhtiyaari, kaas oo gaara maamulka fog ee qalabkan.
4. Faddaraynta wasakhda si loo badbaado
Nidaamka hawlgalka garaadka ayaa si adag u xakameeya wasakheynta udhaxeysa ceelasha. Tuubada caaga ah ee la tuuro ee soo saarida iyo laambada UV ayaa loo isticmaalaa si loo yareeyo wasakheynta udhaxeysa dufcadaha kala duwan.
Talo soo jeedi
Magaca badeecada Xirxirida (tijaabooyinka / xirmada) Bisad Maya
Qalabaynta sanduuqa unugyada xayawaanku ee 'genomic unugyada xirmada' 100T BFMP01M
Qalabaynta sanduuqa unugyada xayawaanku ee 'genomic kit' oo lagu nadiifiyo (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP01R96
Magpure Qalabka dhiigga oo dhan genomic DNA 100T BFMP02M
Magpure Qalabka dhiigga oo dhan genomic DNA (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP02R96
Qalabaynta nadiifinta hiddo-wadaha geedka 'magpure' 100T BFMP03M
Qalabaynta nadiifinta hiddo-wadaha geedka 'magpure' 50T BFMP03S
Qalab nadiifinta hiddo-wadaha geedka 'genomic DNA' (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP03R96
Qalab lagu nadiifiyo fayraska 'Magpure virus' 100T BFMP04M
Qalab lagu nadiifiyo fayraska 'Magpure virus' (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP04R96
Magpure dhibco dhiig qalalan xirmada nadiifinta genomic DNA 100T BFMP05M
Magpure dhibco dhiig qalalan xirmada nadiifinta genomic DNA (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP05R96
Magpure xirmada nadiifinta hiddo-wadaha hiddo-wadaha DNA 100T BFMP06M
Magpure xirmada afka nadiifinta genomic DNA (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP06R96
Magpure xirmooyinka nadiifinta RNA 100T BFMP07M
Magpure wadarta xirmada nadiifinta RNA (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP07R96
Qalab lagu nadiifiyo fayraska 'Magpure virus DNA / RNA' 100T BFMP08M
Magpure virus DNA / RNA kit daahirinta (xirmo horay loo buuxiyey) 96T BFMP08R96
Magaca Xirxirida Bisad Maya
96 saxan ceel qoto dheer (2.2ml) 96 kumbiyuutarro / sanduuq BFMH07
96-caarad 50 kumbiyuutarro / sanduuq BFMH08
Hore: FastCycler Kulayliyaha Kulaylka
Xiga: Nidaamka Nadiifinta Acid-32
Mashiinka Soosaarida Acid Nucleic otomaatig ah
Gooni Goynta Iyo Daahirinta Nucleic Acids
Hababka Soo Saarida Acid Nucleic
Gooni Goynta Acid Nucleic
Hababka Nadiifinta Acid
Nidaamka Sawirka Jel
FastCycler Kulayliyaha Kulaylka
BF-midi DNA Horpontal Gel-Electro ...
Nidaamka Nadiifinta Acid-32